२०७७ श्रावण १४ बुधबार ०८:४८:०० प्रकाशित
लकडाउन खुलेसँगै पसलहरुमा किनमेल गर्ने मानिसहरुको भीड बढ्न थालेको छ। बिहानैदेखि किराना, तरकारी तथा फलफूल र फेन्सी पसलहरु खुलेका देखिन्छन्। ती पसलमा किनमेल गर्ने मानिसको भीड पनि उतिकै बढ्न थालेको छ।
काठमाडौंको असन बजारमा लकडाउन अवधिमा चलहपहल शून्यजस्तै थियो। लत्ताकपडादेखि खाद्य सामग्री, तरकारी, भाडाकुँडा एकै स्थानमा पाइने हुनाले लकडाउनअघि असन बजार मानिसको भीडले ढाकिएको हुन्थ्यो। लकडाउन खुलेसँगै फेरि असनमा पसलहरु खुल्न थालेका छन्। किनमेल गर्ने मानिसको भीड पनि बढेको छ।
असनमा सामान किन्दै गरेकी एक उपभोक्ता पहिलेजस्तो ढुक्क भएर भीडभाडमा सामान किनमेल गर्ने अवस्था नरहेको बताउँछिन्। उनले आफू घरायसी सामग्री खरिद गर्न निस्कँदा मास्क लगाउने, स्यानिटाइटर प्रयोग गर्ने र भौतिक दूरी कायम गर्ने र किनमेल सकेपछि घर गई साबुनपानीले हात धुने गरेको उनले बताइन्।
अर्का एकजना उपभोक्ता पृथ्वीनारायण श्रेष्ठ सरकारले बाध्यताले लकडाउन हटाएपनि कोरोनाको जोखिम रहिरहेकाले लापरबाही गर्न नहुने बताउँछन्। संक्रमणको जोखिम पहिलेभन्दा बढीे भएकाले प्रत्येक व्यक्तिले हरपल सर्तक रहनुपर्ने बताए।
उपभोक्ता मात्र नभई व्यापारीहरु पनि लकडाउनपछि संक्रमणबाट जागिन अपनाउनुपर्ने मापदण्ड पालना गरिरहेको बताउँछन्।
काठमाडौंको न्यूरोडमा घडी, चस्माको व्यापार गर्दै आएका नयाँबजारका अर्जुन श्रेष्ठले आफूले मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरेको बताए। उनले पसलमा आउने ग्राहकलाई समेत मास्क नलगाएको भए लगाउन अनुरोध गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालस्थित विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा जोस भ्यान्देलियर पनि पसलमा अन्य मानिससँग सम्पर्क हुने संभावना बढी हुने भएकाले दूरी कायम गर्दै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्।
उनले भने, ‘किराना पसलमा बिक्रेताका साथै अन्य ग्राहक पनि हुने भएकाले सधैँै दूरी कायम गर्न सहज नहुन पनि सक्छ। तर भिडभाडमा पनि दूरी कायम गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ। यस्तै हात सरसफाइ गर्नु पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना संक्रमणबाट बच्न अपनाउनुपर्ने विषयलाई समेटेर ‘जनस्वास्थ्यका मापदण्ड २०७७’ कार्यान्वयनमा ल्याएका छ।
उक्त मापदण्डमा कोरोनाको संभावित संक्रमणबाट जोगिन भौतिक दूरी कायम राख्न, मास्कको प्रयोग र हातको सरसफाईमा जोड दिइएको छ।
साथै यसका साथै अनावश्यक वस्तु तथा सतह नछुन, अनुहारको टी–क्षेत्र अर्थात् आँखा, नाक र मुखलाई अनावश्यक रुपमा नछुन, सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी नथुक्न, सम्भव भएसम्म पैसाको कारोबार गर्दा विद्युतीय माध्यम अपनाउन आग्रह गरिएको छ।
यस्तै, खोक्दा वा हाच्छ्यूँ गर्दा सकेसम्म रुमाल वा टिस्यु पेपरले मुख छोप्ने, सम्भव नभए कुहिनाले छोप्ने, ज्वरो, खोकी तथा श्वासप्रस्वासको समस्या भएका व्यक्तिहरुले सकभर जनसम्पर्कमा नजाने, आउने परेको खण्डमा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नेलगायतका कुराहरु मापदण्डमा उल्लेख छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि पसलबाट घरायसी सामग्री किनमेल गर्दा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिबीच कम्तीमा एक मिटरको दूरी कायम राख्ने, खाद्य सामग्रीको प्रयोग गर्ने मिति छ कि छैन जाँच गर्ने र ताजा र रेफ्रिजरेटरमा राखिएका खाद्यवस्तु मात्र खरीद गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यसका साथै खाद्यसामग्रीको प्याकेजिङ राम्रोसँग छ कि छैन हेर्ने, पैसा छोएपछि र अन्य ठाउँहरुमा छोएपछि साबुनपानीले मिचिमिची हात धुने वा स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न पनि सुझाएको छ।
२. लकडाउनबारे सुझाव लिन प्रधानमन्त्रीले आज जनस्वास्थ्य विज्ञसँग छलफल गर्ने
१०. कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाको खोजी कार्य ‘कन्ट्याक्ट 'ट्रेसिङ’ के हो, किन गरिन्छ, कसरी गरिन्छ?